Maraykanka, 11 January 2017
Mareykanka oo ka Digay in loo Safro Soomaaliya
Khudbaddii ugu Dambeysay Obama iyo Fallanqeyn ku Saabsan
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa xalay magaalada Chicago ka jeediyey khudbaddiisii u dambaysay isagoo madaxweyne ah.
Shiinaha oo ka Horyimid Kulankii Cruz iyo Tsai Ing-wen
Dowlada Shiinaha ayaa sheegtay inay kasoo horjeedo xiriir walba oo dhex mara hogaamiyaasha Taiwan iyo saraakiisha Mareykanka, maalin kadib marki ay haweeneyda madaxweynaha ka ah Jaziirada Taiwan Tsai Ing-wen ay la kulantay senator Ted Cruz iyo gudoomiyaha gobolka Texas Greg Abbott.
OHIO: Darawaliin Waayi Kara Shatiyada Baabuurta Waaweyn
Gobolka Ohio ayaa uga digay boqolaal muhaajiriin ah oo Soomaaliduna ku jirto inay waayi doonaan shatiyada lagu wado baaburta waaweyn, haddii aanay keeni caddeyn muujinaysa dhalashada Maraykanka ama warqadda dagannaanka abadiyada ee dalkan ay ku joogaan
Sirdoonka: Ruushku Doorashadii wuu Faragaliyay
Madaxda Hay'addaha Sirdoonka Maraykanka ayaa Khamiistii shalay sheegay in caddeymaha ay hayaan ay muujinayaan in Ruusku uu faragelin ku sameeyay doorashadii madaxtinimada ee bishii November ka dhacday Maraykanka.
Wiilka Bin Laden oo Liiska Argagixisada lagu Daray
Hamza Bin Laden oo ah wiil u dhalay hoggaamiyihii ururka al-Qaacida Osama Bin Laden ayaa wasaaradda Arr. Dibedda Maraykanku ay ku diirtay liiska argagixisada, kadib markii uu xubin ka noqday ururka a-l-Qaacida.
Madaxweynaha Mareykanka Barak Obama ayaa shaley booqdey Capital Hill, si uu ula kulmo xildhibaanada Aqalka Sare iyo kan Hoose ee xisbiga Dimuquraadiga oo uu kala hadlayey si ay ubadbaadiyey sharciga uu ka tagey ee Caymiska Caafimaadka, loona yaqaan Obama Care.
Minnesota: Ilhaan Cumar oo la Dhaariyey
Ilhaan Cumar oo Maanta la Dhaarinayo
Magaalada Minneapolis ee Gobolka Minnesota waxaa maanta gelinka dambe lagu dhaarin doonaa Ilhaan Cumar oo noqotay gabdhii ugu horraysay ee Soomalai ah ee ka mid noqota Aqalka Sharcidejinta Gobolka.